Vaovao Samihafa Archives - Page 146 sur 215 -
Tantara an-tsary : Hisantatra ny hetsika « Gasy bulles » ny fifaninanana
08/04/2017 admintriatra 0
Miditra amin’ny andiany faha-13. Toa ny mahazatra, manamarika ny hetsika ho an’ny tantara an-tsary na ny « Festival Gasy Bulles » ny volana Jona. Hisantatra ity hetsika ity anefa ny fifaninanana tantara an-tsary, « Bmoi Amie des Arts ». …Tohiny
07/04/2017 admintriatra 0
Lapan’ny fanatanjahantena – Mahamasina « Revy Njila 100% » no lohatenin’ny fampisehoana tokana hiarahan’i Njila sy Poopy ny alahady izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro etsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Mandritra io fampisehoana io no handrenesana indray …Tohiny
Hetsika ara-kolontsaina : Hanentana ny ankizy tsy hisotro ny zava-pisotro misy alikaola ny « THB Tour »
05/04/2017 admintriatra 0
Fanao isan-taona nefa ahitana fiovana hatrany. Hotanterahina ny 15 ka hatramin’ny 17Avrily izao any Antsirabe ny seho voalohany amin’ny « THB Tour ». Na dia ao anatin’ny fety sy ny fiaraha-mifaly miaraka amin’ilay teny filamatra « Soa ny fiarahantsika » …Tohiny
Fetin’ny Paska : Tsy ho tazana eto an-drenivohitra i Nina’s
04/04/2017 admintriatra 0
Andriambavilanitra mpanakanto fiantson’ireo mpikarakara hetsika. Tsy ho tazana amin’ireo fampisehoana eto an-drenivohitra i Nina’s mandritra ny fetin’ny Paska. « Tsy misy antony manokana fa izay no fandaharam-potoana efa voafaritra », araka ny fanazavan’i Jean Claude Vera mpikarakara …Tohiny
« 1 … 144 145 146 147 148 … 215 »